Ny fomba 5 ambony hanatsarana ny fizotry ny fandoavam-bola amin'ny finday | Martech Zone
Alakamisy Oktobra Oktobra 26, 2017 Eran Feinstein
Ireo finday avo lenta sy takelaka dia fitaovana malaza be mpampiasa izay ampiasain'ny olona isan'andro. Raha resaka ecommerce dia manjary lasa safidy malaza ny fandoavam-bola amin'ny finday, noho ny fahamoram-panahy sy ny fahafaha-manao mandoa na aiza na aiza, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny paompy vitsivitsy fotsiny. Amin'ny maha mpivarotra anao, ny fanatsarana ny fizotran'ny fandoavanao finday dia fampiasam-bola mendrika izay hitarika amin'ny fitomboan'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, ary amin'ny farany - ny varotra bebe kokoa.
Ny dingam-pandoavam-bola ambany dia hanakana anao tsy hahatratra ny tanjon'ny fifanakalozana finday ho an'ny indostriao ary mety hiteraka chargebacks maro an'isa. Raha nahatsikaritra ireo famantarana ireo ianao dia ilaina indrindra ny manatsara. Misy dingana maromaro azonao raisina hanatsarana ny fizotran'ny fandoavam-bola amin'ny finday. Ireto ny dimy voalohany:
1. Mamorona tranokala namana
Ity no lafiny manakiana indrindra amin'ny famoronana lamina fandoavam-bola amin'ny finday. Tokony hamaly ny tranonkalanao - mampifanaraka ny tenany amin'ny fampiasana finday mba tsy hila hametaka na hanindry bokotra kely ny mpampiasa. Ireo tranokala izay tsy nohamarinina ho an'ny finday dia mahasosotra ary afaka manakana ny mpanjifa tsy hamita ny fizotran'ny fandoavam-bola tanteraka. Araka ny Adobe, mpanjifa efa ho 8 amin'ny 10 no hijanona tsy hifandray amin'ny atiny raha tsy miseho tsara amin'ny fitaovany izany.
Famolavolana madio sy kely dia kely, miaraka amin'ny bokotra lehibe sy lahatsoratra mora vakina, dia hahafahan'ny mpanjifa mandroso haingana amin'ny alàlan'ny fizotran'ny varotra sy ny fifanakalozana. Ny PSP sasany dia afaka manome pejy fandoavam-bola fampiantranoana izay natao manokana ho an'ireo mpampiasa finday.
Ho fanampin'ny tranokala mahasoa finday dia afaka mamorona rindranasa finday ihany koa ianao. Ireo mpampiasa dia afaka misintona ny fampiharana amin'ny findainy ary manokatra azy amin'ny paompy tokana, mitazona ny marika eo am-pelatanany, 24/7.
2. Manolora fomba fandoavam-bola amin'ny finday
Mety ho toa ny milaza ny miharihary, fa manolotra fomba fandoavam-bola amin'ny finday fomba tsara iray hisarihana ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny finday. Ny PSP iarahanao miasa dia tokony ho afaka hampifangaro ny fomba fandoavam-bola amin'ny finday, toy ny poketra finday sy ny vola finday, izay ahafahan'ny mpampiasa mandoa amin'ny findainy. Ny fomba fandoavam-bola hafa, toy ny fampiasana carte de crédit, dia misy fampidirana an-tanana ny fampahalalana, izay sarotra amin'ny efijery kely ary mitaky fotoana be dia be. Mifanohitra amin'izany, ny fandoavam-bola amin'ny finday dia azo atao amin'ny swipe sy paompy vitsivitsy fotsiny. Raha haingana ny fizotran'ny fandoavam-bola, dia vao mainka mety hisy mpanjifa hamita azy io, hampihena be ny fandaozana ny sarety.
3. Avelao ny fiantsenana Omni-Channel
Na aiza na aiza no misy ny teknolojia - mety hanana mpanjifa maro ianao izay manomboka mizaha ny tranokalanao ao an-trano ary maniry ny hamita ny fividianana azy ireo miaraka amin'ny findainy. Raha mifandrindra ny fantsom-pandoavanao dia lasa tsy olana izany. Fikarohana nataon'i Vondrona Aberdeen nahita fa ny orinasa manana paikadim-pifandraisan'ny mpanjifa omni-channel dia manana tahan'ny fihazonana 89%, raha 33% fotsiny no tsy misy. Ny tranokalanao na ny fampiharana anao dia tokony hitovy amin'ny tranokalanao amin'ny endriny. Tokony hanolotra fomba fandoavam-bola mitovy amin'izany ihany koa izy - miresaka amin'ny PSP anao hahazoana antoka fa azo atao izany.
4. Alao antoka fa manana fiarovana manokana ho an'ny finday ianao
Ny fiarovana ny hosoka dia zava-dehibe amin'ny sehatry ny ecommerce rehetra, fa ny fandrahonana fiarovana dia tsy mitovy amin'ny fantsona rehetra. Rehefa misafidy PSP dia alao antoka fa afaka manome fiarovana voatokana ho an'ny fandoavam-bola amin'ny finday izy ireo, satria ny hosoka amin'ny alàlan'ny telefaona finday dia matetika tsy mitovy amin'ny hosoka atao amin'ny Internet. Ny fanamorana ny fizotran'ny fandoavam-bola amin'ny finday sy ny fampahalalana kely indrindra napetraky ny mpampiasa dia mety hampitombo ny loza mety hitranga amin'ny hosoka, ka hahatonga ny filaminana ho lohalaharana. Ny teknikan'ny fiarovana amin'ny finday dia misy ny fitaovana fanarahana ary ny fampifandraisana ny toerana misy azy ireo amin'ny adiresy faktiora sy fandefasana, ary koa ny famakafakana ireo fitaovana rehefa mandeha ny fotoana, mba hahitana izay fifanakalozana mampiahiahy na hetsika atao.
5. Miaraha miasa amin'ny PSP izay manome vahaolana mitambatra
Niresaka momba ny fomba fanatsarana ny traikefa ho an'ny mpanjifa izahay, fa ianao kosa ahoana? Amin'ny maha mpivarotra anao dia tianao ho mora tantana ny fizotran'ny fandoavam-bola. Tsara mpanome tolotra fandoavambola (PSP) dia hanolotra vahaolana mitambatra ho an'ny finday sy ny birao, miaraka amin'ny fomba fandoavam-bola marobe. Tokony hanome fitaovana hanamora ny fampidiranao ny fomba fandoavam-bola amin'ny finday izy ireo. Ireo fitaovana ireo dia mety misy kit ho fampandrosoana rindrambaiko sy API fandoavam-bola amin'ny finday.
Ny dingan'ny fandoavam-bola amin'ny finday tsara indrindra dia midika hoe famolavolana ny traikefa finday hifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa finday. Mamorona tranokala voatokana izay taratry ny tranokalanao, ary alao izy amin'ny fomba fiarovana sy fandoavam-bola mifanaraka amin'izany, ho an'ny mpanjifa finday faly kokoa, ary fampitomboana ny fiovam-po.
Tags: fifanakalozana findaynamana mahafinaritrafandoavam-bola amin'ny findayfiarovana findayfiantsenana omni-channelPSP